Metallized aln aluminium nitride ceramic CoB substrate China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > I-Metallized Ceramic Substrate > Metallized aln aluminium nitride ceramic CoB substrate
I-aluminium nitride i-coB substrate
Sinikeza izinhlobo ezahlukene ze-aluminium nitride CoB substrate ngokucindezela okumile kusuka kumaminithi. ubukhulu obukhulu obukhulu ngobukhulu obuhlukile, kufaka phakathi 0.30 obukhulu, 0.38 obukhulu, 0.50mm obukhulu, 0.635mm obukhulu, 1.0mm obukhulu. Ngaphandle kwalokho, ukuqina okwenziwe ngokwezifiso kuyaphumelela ukunikela.
Kanti futhi ubujamo obunzima, ukwelashwa okucacile okuphezulu kanye nesidingo esisemqoka esingaba khona singatholakala ngokugaya, ukupholisa, ukusika, ukusika, i-CNC maching nokunye.
I-Aluminium Nitride CoB Isisekelo
I-Aluminium Nitride Wafer